LG Gaming Monitor "Free Gift" Promotion ~ The ICT.com.mm Blog
LG Gaming Monitor “Free Gift” Promotion
LG Gaming Monitor တစ်လုံးဝယ်ယူတိုင်း #Razer Death Adder Essential – #Right-Handed #Gaming #Mouse နဲ့ #Logitech #Media Combo #MK120 (Keyboard & Mouse) တို့ကို လက်ဆောင်ပေးသွားမှာနော်။ အောက်တိုဘာလကုန်ထိပဲ ပေးတာမို့ Gaming Monitor လေးဝယ်ရင်း လက်ဆောင်ရယူဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Buy now » https://bit.ly/3ontpXT
» အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်ရင် ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
#KBZPay, #WavePay, #CBPay, #Visa, #MasterCard, #MPU, #UnionPay, Direct bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB တို့ကို လက်ခံပါသည်။
� မေးခွန်းများ ရှိပါက?
� Happy Shopping!
#ShopICT #Myanmar #orderonlinenow #LG #gamingmonitors #freegifts #razermouse #logitechMK120
Newer Epic in every way!!! Samsung S21Ultra ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
Older အိုင်စီတီ မှာ Acer Brand ရဲ့ Laptop, Gaming monitors and projectors တွေအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်